I-Saint Ramon Nonato «Umthandazo» 【【UMxhasi wabafazi abakhulelweyo】
URamón Nonato, inkolo yaseMercedarian, wafumana i-epithet nonnatus (evela kwisiLatin engekazalwa) njengesiphumo sokususwa kwisibeleko sikanina ngecandelo lokuhlinzwa emva kokufa okufanayo.
Ngesi sizathu, yi Ingcwele yabaxhasi ababhinqileyo kwezabasebenzi, abantwana, abasetyhini abakhulelweyo, ababelekisi kunye nabantu abatyholwa ngobuxoki. Zimbalwa iinkcukacha ezithembekileyo ezaziwayo ngobomi beSan Ramón, obabelwe ukunikwa kwazo zonke iintlobo zemimangaliso.
1 Ngubani le ingcwele ingcwele ethi "engekazalwa"?
2 Imbali "yonyana kaMariya"
3 Ungambuza njani ongcwele wobulumko
3.1 Umthandazo kuSan Ramón Nonato ucele ukukhuselwa kwakhe
3.2 I-novena ekhethekileyo yabasetyhini abakhulelweyo
3.3 Ividiyo ngomthandazo kuSan Ramón Nonato wokuvala iilwimi ezimbi kunye neentshaba:
Ngubani le ingcwele ingcwele ethi "engekazalwa"?
USan Ramón wazalelwa kusapho oluhloniphekileyo ePortell, kufutshane neBarcelona (eSpain) ngonyaka we-1200. Wehla evela kubazali abanesidima nababekekileyo, ezinxulumene neentsapho ezibalaseleyo zikaFox noCardona. Lo ungcwele wazalelwa eIberia, nangona kunjalo, USanta Anthony wasePadua Wazalelwa kuyo, kanye ePortugal.
Ukususela esemncinci wayenjalo uthobekile, uzinikele, ulumkile kwaye uyathobela utata wakheemoyikayo uThixo, esilumkileyo isazela sakhe, ethe tye ngamazwi akhe;
Uyise wayecwangcise ukumnika umsebenzi waseburhulumenteni, yiyo loo nto emthumele e-Barcelona ukuba aqalise izifundo zakhe, apho wadibana khona nomrhwebi uPedro Nolasco, ekhulisa ubuhlobo bakhe kwaye eqala ukuthembela kurhulumente, owawungathandanga kuye. utata.
Ejongene neso siganeko, uRamón wabuyela ePortell eyokukhathalela amasimi osapho. Uya kudibana ngqo nendalo xa esiva ubizo lwangaphakathi, ekhulisa uthando olunzulu ngeNtombi enguMariya, nto leyo eyabangela ukuba abantu bambize ngokuba "ngunyana kaMariya".
Kuthiwa, ngexa uRamón omncinci wayezinikela emthandazweni, izulu lamxhasa ngokuthumela ingelosi ukuba imncede Kwaye yayiyintombi Enyulu eyathetha noRamón ngomnqweno wakhe wokuba angene kwi-Order of Mercy, eyayisandula kusekelwa e-Barcelona ukukhulula abathinjwa.
Imbali "yonyana kaMariya"
Ekugqibeleni, utata wakhe wamnika imvume yokujoyina i-odolo leMercedarians. Inkqubela phambili yakhe yayimangalisa kangangokuba, kwiminyaka nje emibini okanye emithathu emva kokuzibanga ukuba waphumelela eSan Pedro Nolasco, umseki e-ofisini. ye "mkhululi okanye umhlanguli wabathinjwa."
Umsebenzi onjalo unokutshintsha ikhondo lobomi bukaRamón, owayefumana ubunzima obungenakubalwa. Wathunyelwa eMntla Afrika ngesixa semali kwaye eAlgiers wahlangula inyambalala yamakhoboka. Ngenye imini yaphela imali Wazinikela ekuthinjweni ngenxa yokukhululeka kwamabanjwa aliqela ababesengxakini enkulu kwaye ukholo lwabo lwalusengozini.
Nangona kunjalo, umbingelelo ongcwele wabacaphukisa abo bangakholwayo, ababemjezisa. Nangona kunjalo, umantyi oyintloko woyika ukuba ukusweleka kwakhe kuyakuthetha ukulahleka kwemali ebekiweyo yentlawulelo yamabanjwa awameleyo kwaye wayalela ukuba aphathwe ngobuntu.
Kungoko ingcwele yaqala ukuphuma yaya ezitalatweni, ithuthuzela amaKristu kwaye iguqula amaSilamsi. Xa inkqubo enjalo ifike ezindlebeni zerhuluneli, wagwetyelwa ukufa ebethelelwe, kodwa kwaphinda kwavela umdla woqoqosho, ukuze eso sigwebo singafezekiswa, singamoyisi ukuba angatywatyushwa.
Nangona kunjalo, impatho embi enjalo ayizange imtyhafise uRamón Ndiyaqhubeka nokushumayela nokunceda.
Kule meko imbi kangaka wahlala iinyanga ezisibhozo de uSan Pedro Nolasco wakwazi ukuthumela amalungu athile omyalelo wokuba amhlangule. Ngokuthobela, uBarcelonan wabuyela eSpain, apho wayeza kuthi aphele sele ebizwa nguKhadinali nguPopu Gregory IX. Ngaphandle kwesikhundla esiphakamileyo, akazange abutshintshe ubomi bakhe obulula okanye iimpahla zakhe ezithobekileyo, kunye neseli yakhe ehlwempuzekileyo.
Emva kwexesha, uPopu wamcela ukuba aye eRoma, esenza uhambo njengenkolo ethobekileyo awayezijonga yona. Ukufika kwakhe eCardona, ekumgama omalunga neekhilomitha ezilishumi ukusuka eBarcelona, ​​wagula kwaye umkhuhlane onamandla wabangela ukuba afe ngo-Agasti 31, 1940., umhla iSan Ramón Nonato ibhiyozelwa ngawo.
Kungekudala uCardona waba yindawo ekuhambo kuyo kwaye ingcwele yangcwatyelwa kwicawa yaseSan Nicolás de Portell. Ngo-1657 uPopu Alexander VII wayifaka kwiRome Martyrology.
Ikhomishini eyonyulwe nguPopu Benedict XIV yacebisa ukucinezelwa kwekhalenda yomthendeleko waseSan Ramón inikwa ubunzima ekufumaneni amaxwebhu athembekileyo ngobomi bakhe.
Njengomdla, yithi Ithetha ntoni iSan Ramón Nonato, Ra = ubuThixo kunye neMon = ikhuselwe. Ngokubhekisele kwigama elingekazalwa, sele sibhekisile kulo ekuqaleni.
Ungambuza njani ongcwele wobulumko
Ukuba uthandabuza malunga Yintoni ebuzwa nguSan Ramón NonatoKuya kufuneka uyazi ukuba ngaphandle kokuhlonitshwa ikakhulu ukukhusela abasetyhini abakhulelweyo abasemngciphekweni omkhulu kwaye xa izifo okanye iingozi ezibeka ubomi beentsana emngciphekweni zisenzeka, uyacelwa ukuba ufumane oonesi nootishala abathe tye. isimilo esingumzekelo.
Ungoyena ungcwele kubo bonke abasetyhini xa bezala. Kukho inkolelo kwinxenye yabantu yokuba baya kufumana ubabalo lwesanta xa begquma umlomo wakhe ngetshefu okanye iteyiphu, isimilo esingamkelekanga yiCawe, esiqondayo ukuba umfanekiso weSan Ramón kufuneka uphathwe ngentlonipho enkulu .
Kucelwa abantwana abasandul 'ukuzalwa, abo baneminyaka engaphantsi kweminyaka emibini, ukuba bagqibezele ukukhulelwa, ngakumbi kwezo meko apho kukho iingxaki, kwaye kanjani ukukhusela kwizithuko nomona, ekubeni ngongcwele omela ubulumko kwaye ugxotha ukuhleba kunye nokuhleba, efumanisa ukunyelisa.
Akumangalisi ke ngoko ukuba kukho imithandazo eya kuSan Ramón Nonato yokucela ukukhuselwa kwakhe, ukukhulelwa, ukuhanjiswa ngolonwabo kunye nokuzivalela, phakathi kwabanye.
Umthandazo kuSan Ramón Nonato ucele ukukhuselwa kwakhe
"Owu! U-Saint Ramón ozukileyo, onamandla akhe uThixo awubeke umhlaba kunye nezinto, impilo kunye nezifo, ubomi kunye ukufaUkufumana ekuthetheni kwakho okunamandla, iintombi zikhuthaza, ukulandelelana okutshatileyo, ukuziphendulela kwabo batyholwayo, ukuvuna abalimi, ukumisa inqanawa, ukukhulula abathinjiweyo, ukubona iimfama kunye nokuphelisa bonke ububi; ngenxa yokuba umnqweno wakho wokufumana iSakramente Esikelelekileyo, enyanzelisa uYesu Krestu ukuba akunike uMthendeleko oNgcwele ezandleni zakhe ezisikelelekileyo, ndiyakucela ukuba undithethelele ukuze ndikulungele ukuya kulo msitho wasezulwini, kwaye umamkele eViaticum ekupheleni kobomi bam, nangaphezulu konke abanokulufumana ubabalo olukhethekileyo endilucelayo kuwe kunye nolonwabo lwanaphakade lozuko. Amen. "
Kuphawuleka ukuba naye i-novena ekhethekileyo yabasetyhini abakhulelweyo, eyenziwa kube kanye ngenyanga, ukusuka kwinyanga apho umntu okhulelweyo esaziwa ngayo. Inyanga yokugqibela iyakubamba i-novena yeentsuku ezilithoba.
I-novena ekhethekileyo yabasetyhini abakhulelweyo
“OwuSan Ramón Nonato umhle. Ndiza kuwe ndichukunyiswe bububele obukhulu obaphatha ngabo ubathandayo. Yamkela, Oyingcwele wam, le mithandazo ndiyinikela kuwe ngokuzithandela, kwimemori yemithandazo yakho encomekayo, efike kuThixo yokuba ungumxhasi okhethekileyo wabasetyhini abakhulelweyo. Nanku ke oyiNgcwele wam, omnye wabo othobekileyo phantsi kokhuseleko lwakho nokhuselo lwakho, ecenga nawe ukuba, njengokuba umonde wakho wawusoloko ugcinwe ungoyiswanga kuzo zonke iinyanga ezisibhozo apho wabulawelwa ukholo lwakho ngokungafaniyo nezinye iintlungu ozichithe ngaphakathi Ukusuka kwintolongo emnyama kwaye kwinyanga yesithoba uzishiye zonke ezo ntolongo zikhululekile, ngcwele kwaye ngummeli wam, ngokuthobekileyo ndiyakucela ukuba ufikelele kum uvela kuThixo naseNkosini ukuba isidalwa esivaliweyo ezibilini zam sigcinwe ebomini nasempilweni endaweni. Kwiinyanga ezisibhozo, ngeyethoba, ndihamba ndikhululekile ekukhanyeni kweli hlabathi, ndikwenza Wena, oyiNgcwele wam, ukuba kanye ngala mhla umphefumlo wakho wawushiya ngawo umzimba wakho wawungeCawa, wona ngumhla wovuyo nemihlali, Ngamana ndingavuya kwaye ndonwabe ngomhla wokuzalwa kwam, ngazo zonke ezo meko uyazi ukuba zilungele uzuko olukhulu lukaThixo nolwakho kunye nosindiso lomphefumlo wam kunye nolo lonyana wam. Amen. "
Zininzi santos abantu obaziyo abathandazwayo kwiimeko ezinzima zobomi. Ke yinto esele iqhubeka iminyaka emininzi.
Ividiyo ngomthandazo kuSan Ramón Nonato wokuvala iilwimi ezimbi kunye neentshaba: